မှတ်စုများ: Do ရန်အရောင်အသွေးစုံကို Notepad မှတ်ချက်, သတိပေးချက်, Memo APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မှတ်စုများ: Do ရန်အရောင်အသွေးစုံကို Notepad မှတ်ချက်, သတိပေးချက်, မှတ်စု
မှတ်စုများ: Do ရန်အရောင်အသွေးစုံကို Notepad မှတ်ချက်, သတိပေးချက်, Memo APK ကို
Chroma မှတ်ချက်™ အရောင်အားဖြင့်မှတ်စုယူရိုးရှင်းတဲ့ notepad App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုဆင်းယူမှတ်စုများရှိအခါတိုင်းရိုးရိုးသင့်ရဲ့ notepad ကိုဖွင့်မှတ်စုစာအုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားရန်ရိုးရှင်းသောရောင်စုံမှတ်စုများကိုယူပါ။ အရောင် notepad လက်မှာမှတ်စုစာအုပ်နှင့်အတူဘဝကိုရိုးရှင်းစေသည်။ Chroma မှတ်ချက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစေးကပ်ရောင်စုံမှတ်စုစာအုပ်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပေမယ့်ဝေးပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့သုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ။Chroma မှတ်ချက် app ကိုအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
1 ။ အရောင်အားဖြင့်မှတ်စုများ Organize ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရောင်မှတ်စုစာအုပ်ကိုဖန်တီးပါ။
2 ။ quick မှတ်စု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notepad app ကိုသာသင်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်, စက္ကန့်အတွင်းမှတ်စုယူပါ။
4 ။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းများအတွက်ရိုးရှင်းသော To-do list ကို။
5 ။ widget: အကို Notepad app ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မလိုဘဲစေနှင့်သင့်မှတ်စုမှတဆင့် scroll ။
6 ။ အော့ဖ်လိုင်း: app ကိုလုံးဝအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ် notepad ။ အဘယ်သူမျှမ WIFI အားလုံးမှာလိုအပ်သည်။
7 ။ သတိပေးချက်: ရသောအခါလိုအပ်သောကြောင့်အရာများကိုသင်တို့အားသတိပေးနေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါကျနော်တို့သာအကြောင်းကြားစာများပေးပို့။
8 ။ Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း: ပုံစံကုဒ်နှင့်သင်၏မှတ်စုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။အဘယ်ကြောင့် Chroma မှတ်စုများကိုရွေးချယ်ပါ?
1 ။ အသုံးဝင်သောစံချိန်
2 ။ အရေးအသားကူညီပေးသည်။
3 ။ အတွေးအခေါ်များစီးဆင်းကူညီပေးသည်။
4 ။ သငျသညျစတင်ရန်ကူညီပေးသည်။
5 ။ နားလည်မှုကူညီပေးသည်
6 ။ မှတ်ဉာဏ်ကိုကူညီပေးပါ:
ခ။ ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုကူညီပေးပါထိရောက်သော Chroma Notebook ယူနည်း
1 ။ အကျဉ်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Be - မျဉ်းသားများနှင့်အရောင်ကိုသုံးပါ
2 ။ အသုံးဝင်သော Be - မလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်ထွက်ခုတ်ဖြတ်
3 ။ ဒါပေမယ့်သာသင်တို့အဘို့, အရည်အချင်းပြည့်မီ Be - မည်သူမျှမဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
4 ။ သငျသညျတဖနျကိုအသုံးပွုဖို့လိုအပျကွောငျးဆိုအသုံးဝင်သောအမည်များ, ရက်စွဲများ, စာရင်းဇယားဆံ့သငျ့သညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Notebook app ကိုသငျသညျမှတ်ချက်ယူပြီးပျော်မွေ့ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သော Samsung နှင့် Motorola ကဖုန်းများများအတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ် - Chroma မှတ်ချက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုများ: Do ရန်အရောင်အသွေးစုံကို Notepad မှတ်ချက်, သတိပေးချက်, မှတ်စု
8.78 ကို MB